Novonjena haingana tamin’ny helikoptera: zandary iray naratra mafy voatifitry ny dahalo | NewsMada
Novonjena haingana tamin’ny helikoptera: zandary iray naratra mafy voatifitry ny dahalo
Par Taratra sur 31/08/2019
Nandritra ny fifandonana tamin’ny dahalo 10 lahy, tao Amboraka, distrikan’i Befotaka, ny marainan’ny alakamisy teo no nahavoa ity zandary iray ity. Naratra mafy tokoa izy satria teo amin’ny tavany no voatifitra.
Naratra mafy vokatry ny tifitra nataon’ny dahalo ny zandary G2C Rabefinaritra Toky nandritra ny fifandonana tamin’ny dahalo tao Amboraka, kaominina ambanivohitr’i Marovitsika, distrikan’i Befotaka, faritra Atsimo Atsinanana, afakomaly. Araka ny fampitam-baovao voaray avy amin’ny sampandraharaha misahana ny fampitam-baovao eo anivon’ny zandarimariam-pirenena, nanatanteraka asa fisafoana tao amin’ny fokontany Fazaira kaominina ambanivohitr’i Marovitsika ny zandary miisa enina avy ao amin’ny borigadin’ny zandarimaria ao Befotaka, tamin’io fotoana io. Rehefa tonga tao Amboraka anefa izy ireo tamin’ny 6 ora maraina dia nifanehatra tamin’ny andian-dahalo miisa 10 nirongo fiadiana mahery vaika niaraka tamin’ny omby halatra valo. Nitifitra avy hatrany ireo malaso ka raikitra ny fifandonana. Vokany, voatifitra teo amin’ny tarehiny ny G2C Rabefinaritra Toky nandritra ny fifampitifirana. Nohamafisin’ny teo anivon’ny zandarimariam-pirenena fa anisan’ireo maherifo naharava ireo dahalo ity zandary naratra mafy ity.
Homena tambiny manokana ny G2C Rabefinaritra…
Nandalo tao Fianarantsoa niaraka tamin’ny helikoptera ny praiminisitra lehiben’ny governemanta niaraka tamin’ireo minisitra misahana ny fandriampahalemana (Sekreteram-panjakana miadidy ny zandarimariam-pirenena (Seg), minisitry ny fitsarana, minisitry ny atitany, ny minisitry ny Filaminam-bahoaka). Nanapa-kevitra ireo mpikambana ao amin’ny governemanta fa ny ain’ilay zandary aloha no havotana amin’ny alalan’ny helikoptera. Nalaina tamin’ny helikoptera tany Amboraka ilay maherifo mba hotsaboina haingana ao amin’ny hopitalin’i Tambohobe Fianarantsoa. Voalaza fa mbola mandeha an-tongotra hatrany amin’ny 70 km vao mahita hopitaly kanefa ny ran’ilay zandary mijininika tsy misy toy izany.
Omaly vao mangiran-dratsy, tonga nitsidika sy nanolotra ranom-boankazo ho an’ilay zandary naratra ireo minisitra notarihin’ny Seg. Nambaran’ny Seg, ny Jly Ravalomanana Richard fa homena tambiny manokana ity zandary ity noho ny ezaka vitany ho an’ny tanindrazana. Homen’ny fanjakana taona iray koa amin’ny fitondrana ny galona ary homena tambiny manokana ihany koa ireo zandary niaraka taminy nandritra ny fifandonana tamin’ireo dahalo. “Izany no natao dia entina hampirisihina ireo zandary mba hiasa tsara hatrany ary tsy hilavo lefona eo anatrehan’ny dahalo”, hoy ny Seg. Na eo aza ny ezaka ataon’ny fanjakana amin’ny famongorana ny asan-dahalo, tsikaritra fa manao ny ataony hatrany ny dahalo any amin’ireny faritra mena amin’ny tsy fandriampahalemana ireny.
Analanjirofo – Misaona ny zavakanto: nodimandry i Do, mpitendry tamina tarika maro 21/01/2020
Fambolen-kazo Alaotra: « Ampandraiso andraikitra ny fokontany » 21/01/2020
Fanajariana ny Bas Mangoky: tsy ampanofaina amin’ny Arabo ny tany 21/01/2020
Eran-tany: 700 tapitrisa ny miaina ao anaty fahantrana tanteraka 21/01/2020